MARA Scottish Aviation Bulldog T. MK1 Trainer FSX & P3D - Rikoooo
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ a add-on n'ihi na FSX/P3D pịa ebe a
Nke a rụpụtara ụgbọelu nwere zuru FS animations. onwunwu textures na Virtual kokpiiti na ụfọdụ omenala gauges. -Agụnye RAF, Maltese, Ma Swedish agba atụmatụ, nke Swedish atụmatụ inwe ya SK-61 nlereanya.
The Scottish Aviation Bulldog bụ a British abụọ oche-n'akụkụ-na-n'akụkụ (na ịnara atọ oche) ọzụzụ ugbo elu mere site Beagle Aircraft dị ka B.125 Bulldog.
The prototype Bulldog mbụ ama on 19 May 1969 na Shoreham Airport. The mbụ iji maka ụdị bụ maka 78 si Swedish Air Board. Tupu ihe ọ bụla mmepụta ugbo elu e wuru, Beagle Aircraft kwụsịrị trading na mmepụta ikike maka ugbo elu, na Swedish iji, e weghaara Scottish Aviation (Bulldog) Limited. All ụdi ugbo elu e wuru na Prestwick Airport site Scottish Aviation, ma ọ bụ onye e mechara, British Aerospace.